Chinese pombi insulation simbi pombi mugadziri
Three layer PE anti-corrosion structure yepombi: the first layer of epoxy powder (FBE> 100um), the second layer of adhesive (AD) 170 ~ 250um, and the third layer of polyethylene (PE) 2.5 ~ 3.7mm.
2PE / 3PE anticorrosion uye imwe-layer PE anticorrosion
1. 3PE kudzivirirwa kwekuora
Three layer PE anti-corrosion structure yepombi: the first layer of epoxy powder (FBE> 100um), the second layer of adhesive (AD) 170 ~ 250um, and the third layer of polyethylene (PE) 2.5 ~ 3.7mm. Izvo zvinhu zvitatu zvakabatanidzwa uye zvakasimba zvakabatanidzwa nepombi yesimbi kuti iite yakanakisa anti-corrosion coating.
Pipe dhayamita Φ 60～ Φ chiuru nemazana mana nemakumi maviri
2. 2PE anticorrosive simbi pombi
Zvikamu zviviri zvePE anticorrosive chimiro chepombi, yekutanga yeadhesive (AD) uye yechipiri layer ye polyethylene (PE), zvinhu zviviri izvi zvakabatanidzwa, uye ukobvu hwechikamu chimwe nechimwe chakafanana neicho chetatu chepe.
Standard: SY / t0413-2002 tekinoroji chiyero che polyethylene anticorrosive coating yeakavigwa simbi pombi
GB / t23257-2009 chiyero chehunyanzvi chepolyethylene anticorrosive coating yepombi yesimbi yakavigwa
3. Single PE anticorrosive simbi pombi
Kuenzanisa pakati pe-single-layer polyethylene uye matatu-layer polyethylene
Iyo imwe-layer PE anticorrosive simbi pombi inotora nzira yekupfapfaidza (inozivikanwawo senzira yeketeni) kutenderedza pombi yesimbi inopisa nepakati frequency. Iyo yepamusoro yepombi yesimbi igaba rine polyethylene hupfu, iyo inopfapfaidzwa pamadziro ekunze kwepombi yesimbi kuti iite polyethylene coating. Executive chiyero CJ / t120-2008 epurasitiki yakavharwa inoumba simbi pombi yekupa mvura.
Epoxy coal tar pitch anticorrosion
Chigadzirwa chacho chakagadzirirwa kubva epoxy resin, marasha tar pitch, antirust pigment, additives uye modified amine. Chigadzirwa chacho chine zvakanakira kuomesa nekukurumidza, kunamatira kwakanaka, kuchinjika kwakanaka, maviri-chikamu kurongedza uye nyore kuvaka. Iyo ine hunhu hweasidhi, alkali, munyu, mvura uye mafuta kuramba.
2. Hunhu uye kushandiswa
Iyo pendi inosanganisa hunhu hwekusimba kwemagetsi, hombe yekunamatira simba, kemikari yepakati corrosion resistance ye epoxy resin uye kudzivirira mvura, microbial resistance uye plant root resistance yeasphalt. Iyo yakakwirira-inoshanda anti-corrosion insulation coating. Chigadzirwa chacho chine makemikari akanaka ekudzivirira uye kudzivirira mvura.
Inoshanda kune anti-corrosion yemafuta, gasi uye mvura pombi, pombi yemvura, gasi, mapaipi, mafuta ekunatsa, zvidyarwa zvemakemikari uye zvidyarwa zvekuchenesa tsvina. Inogonawo kushandiswa seye-anti-corrosion ye offshore mafuta ekuchera mapuratifomu uye pasi pemvura zvikamu zvezvikepe, pamwe chete ne-anti-corrosion yemigodhi nemidziyo yepasi.
Yakakwirira density polyethylene jekete anti-corrosion chimiro: iyo pombi yesimbi yakaputirwa nepamusoro-density polyethylene zvinhu, iyo ine yakakwirira mechanical simba uye yakanakisa kushora kuramba, uye inogona kudzivirira pombi yesimbi kubva pakukuvadzwa kunokonzerwa nekunze kwezvinhu panguva yekufambisa, kuiswa uye kushandiswa. Antioxidant, ultraviolet stabilizer, carbon black, nezvimwe zvichawedzerwa mukugadzirwa kwekunze sleeve. Iyo polyethylene yekunze sleeve iri nyore kukwegura. Kana iyo yakachengetwa mumhepo yakashama, inofanira kuvharwa ne tarpaulin nezvimwe zvinhu. Nzvimbo yekuchengetera inofanira kunge iri kure nekupisa kwakakwira uye sosi yemoto. Mushure mokunge pombi yesimbi inorwisa-corrosion yagadzirwa, inorambidzwa kuratidzwa kune zuva uye kudzima, kana zvisina kudaro iyo polyethylene yekunze sleeve iri nyore kuputika uye inokanganisa kushanda kwechigadzirwa uye hupenyu hwebasa.
Epoxy poda yakaputirwa ne electrostatic spraying process. Nekuda kwedambudziko rekunamatira epoxy poda impregnation process, iyo impregnation yepoxy powder haina kufarirwa. Parizvino, nekubudirira kwekubudirira kwe special phosphating solution ye epoxy powder impregnation yeSanye, dambudziko rekunamatira epoxy powder impregnation process yakakundwa kekutanga, uye kubuda kwe epoxy powder impregnation kwatanga kuoneka.
Zvivako zvemapombi e-anti-corrosion simbi zvinosanganisira mapaipi anotenderera, mapombi akatwasuka, mapaipi asina musono, nezvimwewo kuChina, anoshandiswa zvakanyanya muminda yeinjiniya yepombi sekufambisa kwemvura kureba, peturu, indasitiri yemakemikari, gasi rechisikigo, kupisa. , kucheneswa kwetsvina, chitubu chemvura, zambuko, chimiro chesimbi, kutapurirana kwemvura yemugungwa nekuputira.
Zvakapfuura: Corrosion resistant simbi pombi mugadziri
Zvinotevera: China thermal insulation simbi pombi fekitari
Yakakura Diameter Anticorrosive Steel Pipe
Corrosion resistance ye galvanized simbi pombi i...
Diki dhayamita anticorrosive simbi pombi yakafara ...
Corrosion resistant high simba simbi pombi fa...
Corrosion resistant simbi pombi mugadziri